Samsung गियर S2 समीक्षा: seventh time lucky for Korean firm's smartwatch - समाचार नियम
Samsung गियर S2 समीक्षा: सातौं समय कोरियाली दृढ गरेको smartwatch लागि भाग्यशाली
एक सातौं प्रयास सैमसंग अन्ततः टूट छ. र माइल - गियर S2 कोरियाई दृढ बनाएको छ सबै भन्दा राम्रो smartwatch छ. यो पनि राम्रो उपलब्ध को एक हो, एक smartwatch अन्तरक्रिया को साँच्चै राम्रो तरिका शुरू.
शीर्षक यो लेख “Samsung गियर S2 समीक्षा: सातौं समय कोरियाली दृढ गरेको smartwatch लागि भाग्यशाली” शमूएल गिब्स द्वारा लेखिएको थियो, सोमवार 9th नोभेम्बर मा theguardian.com लागि 2015 11.26 UTC
सैमसंग smartwatch यसको सातौं डिजाइन संग अन्त टूट छ: एक एक गोल हेर्ने लगभग सबै Android स्मार्टफोन उपयुक्त र एक घुमाउँदा bezel संग भन्ने बस शो को लागि छैन.
संसारको सबैभन्दा ठूलो स्मार्टफोन निर्माता अनुभव बनाउने smartwatches एकदम धेरै छ. यसको पहिलो मा शुरू भएको थियो 2013, तर तब देखि दक्षिण कोरियाली दृढ छ विभिन्न मोडेल बनाएको छ, ती कुनै पनि छ यद्यपि एकदम यसलाई सही पायो.
गियर S2 सैमसंग गरेको सातौं प्रयास छ र यो प्रयास लायक थियो.
गोलो र आकर्षक
यो सधैं-मा सक्रिय एक कम शक्ति प्रदर्शन गर्न स्क्रिन स्विच प्रयोग गर्दा भइरहेको, गुगलको Android Wear हेर्छ प्रयोग जस्तै. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सबै अघिल्लो सैमसंग smartwatches विपरीत, गियर S2 स्लिम छ, राउन्ड र आकर्षक. यो दुई मोडेल आउँछ "क्लासिक" र मानक. म मानक गियर परीक्षण 2.
यो एक स्टेनलेस स्टील शरीर संग एक आधुनिक राउन्ड हेर्ने र ढाला सेतो वा कालो प्लास्टिक पट्टा जस्तो देखिन्छ. एक घुमाउँदा bezel छल्ले एक कुरकुरा 1.2in AMOLED स्क्रिन, जो एक एक गोल smartwatch मा लागि अझै उच्चतम पिक्सेल घनत्व छ 302 इन्च प्रति पिक्सेल. यसको सबैभन्दा नजिकको राउन्ड प्रतियोगी छ 286 ppi Huawei वाच, सैमसंग अर्थ वर्ग, तर सबै धड्किन्छ 42मिमी एप्पल वाच, जो पनि एक 302ppi पिक्सेल गणना छ.
स्क्रिनमा उत्कृष्ट छ: कुरकुरा, साँच्चै गाढा अश्वेतहरुको संग ज्वलन्त, जो बनाउन गाढा हेर्ने देख विशेष राम्रो अनुहार. एन्ड्रोइड समान टुट्नु गर्दा सक्रिय छैन यो एक आधारभूत सेतो-मा-कालो अनुहार स्विच गर्न सक्नुहुन्छ. यो मुख्य अनुहार रूपमा उच्च रूपमा संकल्प छैन, तर एकदम धेरै कुरूप pixelation को मोटो द्वारा प्रयोग रूपमा ग्रस्त छैन 360.
हेर्ने 11.4mm बाक्लो छ, एक बाङ्गो शरीर र tapered डिजाइन धन्यवाद लगाउँथे जब तर slimmer देखिन्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
घडी कलाई मा आराम बस्छन. यसको tapered शरीर डिजाइन को नकल उच्च-अन्त यांत्रिक हेर्छ र घडी 11.4mm मोटाइ केही लुकाउँछ. यो IP68 स्तर पनरोक पनि छ, जो संग showering मतलब छैन समस्या छ मा.
रबर पट्टा उच्च गुणवत्ता को छ र केही Casios विगतमा छ मेरो कलाई पसिना भएन. यो एक स्वामित्व पुस-बटन क्लिप द्वारा ठाउँमा आयोजित गर्नुपर्छ, जो यसलाई हटाउन सजिलो बनाउँछ, तर तपाईं सैमसंग द्वारा प्रस्तावित पट्टियाँ सीमित हुने छौं मतलब.
त्यहाँ बक्स मा दुई हो, को कलाई मा हेर्ने को गहिराई कम एक ठूलो र एक सानो पट्टा. गियर S2 क्लासिक मानक पट्टियाँ लागि परम्परागत हेर्ने lugs छ.
हेर्ने पछाडि हृदय दर मनिटर छ, अन्य smartwatches जस्तै, जो म्यानुअल प्रति मिनेट आफ्नो मुटुको धड्कनहरू रेकर्ड गर्न ट्रिगर गर्न सकिन्छ, वा व्यायाम ट्रयाकर भागको रूपमा प्रयोग. म यसलाई सही गर्न पाइने प्रति मिनेट वरिपरि एक बिट भित्र.
यो पट्टियाँ बाहिर स्वाप गर्न सजिलो, तर तपाईं एक स्वामित्व क्लिप प्रणालीमा सैमसंग धन्यवाद देखि प्रस्तावको के सीमित हुनुहुन्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
प्रोसेसर: samsung Exynos 3250
पर्दा: 1.2sAMOLED मा (302ppi) नीलम
जडान: ब्लूटूथ, वाइफाइ, NFC, म्यारोमीटर, मुटुको दर सेन्सर
आयाम: 42.3 x 49.8 x 11.4
एक दिन र आधा लागि शिघ्र
सानो चुम्बकीय चार्ज अडान तार हेर्ने शुल्क, को watchface प्रदर्शन वा प्रगति चार्ज गर्ने विकल्प. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
गियर S2 शिघ्र र संचालन मा उत्तरदायी महसुस. यो ब्लुटुथ मार्फत वा वाइफाइ स्मार्टफोन जडान, एक पटक एक नेटवर्क कन्फिगर गरिएको छ. अन्य Samsung Tizen smartwatches विपरीत, गियर S2 कुनै पनि आधुनिक एन्ड्रोइड स्मार्टफोन काम गर्नेछ, गियर प्रबन्ध अनुप्रयोगहरू को एक जोडी प्रयोग.
त्यहाँ एक सैमसंग उपकरण आवश्यक छ कि केही कार्यहरु छन्, अर्थात् samsung पे जो प्रयोगकर्ता जागा NFC सँग राम्रो र सेवाहरू भुक्तानी गर्न अनुमति दिन्छ. Samsung पे बेलायत मा सुरु गर्न अझै छ, तर अमेरिकी र दक्षिण कोरिया मा उपलब्ध छ.
जब एक जोडिएको ब्लुटुथ जडान बलियो थियो नेक्सस 6P, जबकि वाइफाइ को आश्चर्यजनक useable T9-शैली स्क्रिनमा किबोर्ड संग पासवर्ड ट्याप गरेर सेट अप गर्न सजिलो थियो. सूचना वाइफाइ तुरुन्तै बुझाइएको थियो, जो सधैं सबै smartwatches लागि मामला छ.
गियर S2 लामो 36 सबै समय मा स्क्रिनमा एक शुल्क मा घन्टा. हेर्ने एक वायरलेस चार्ज डक आउँछ, जो दुई घण्टा अन्तर्गत यो शुल्क.
Tizen, एन्ड्रोइड छैन लुगा
अनुहार को चयन राम्रो छ, र सबै भन्दा अनुकूलित गर्न सकिन्छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
गियर S2 सफ्टवेयर साथ यसको सबैभन्दा ठूलो शक्ति र यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो. कि चलान अन्य एन्ड्रोइड हेर्छ विपरीत गुगलको Android Wear, को S2 सैमसंग आफ्नै Tizen सञ्चालन प्रणाली चल्छ.
अनुकूलन सफ्टवेयर र घुमाउँदा bezel को S2 सबैभन्दा छिटो को एक र smartwatches प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँछ. सूचनाहरू लागि बायाँ मोड, दायाँ संगीत नियन्त्रण जस्तै कुराहरू लागि विजेट लागि, धडकनकाे गति, पात्रो, मौसम अद्यावधिक र फिटनेस ट्रयाकिङ. शीर्ष बाट सफा एक कदम जान्छ फिर्ता, वा तल हेर्ने अनुहार मा एक द्रुत सेटिङहरू छाया खींचती.
एक सानो तीन-डट मेनु ट्याब थप कार्यहरू छ केहि को दायाँ देखिन्छ, जबकि छेउमा सानो बटन तपाईं अनुप्रयोगहरूमा हेर्ने अनुहार गर्न ठूलो बटन लिन्छ र. आफ्नो हातले हेर्ने कवर निद्रामा गर्न राख्छ. यो सबै सजिलै र intuitively काम गर्दछ.
अनुप्रयोगलाई चयन गर्न bezel गर्नुहोस्. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
अन्य अनुप्रयोगहरू एक परिपत्र सूची मा आयोजित गरिन्छ, तर अनुप्रयोगहरू सबै भन्दा ठूलो समस्या हो. त्यहाँ Tizen अपरेटिङ सिस्टम को मूलतः कुनै पनि समावेश व्यक्तिहरूलाई परे किनभने. तपाईं सीएनएन भयो, ब्लूमबर्ग, यहाँ म्याप र Samsung अनुप्रयोगहरू को एक संग्रह, एस स्वास्थ्य र आवाज रिकर्डर सहित.
काम राम्रो समावेश छन् भनेर अनुप्रयोगहरू, तर विकल्प को कमी कुनै पनि समय चाँडै तय गर्न जा छैन Tizen गरेको अपेक्षाकृत सानो प्रयोगकर्ता आधार विकासकर्ताहरूको लागि आकर्षित को धेरै त्यहाँ लागि छ रूपमा वास्तवमा तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न छ मतलब रूपमा Android Wear र स्याउ गरेको watchOS.
त्यहाँ प्रणाली अनौठो quirks छन्. उदाहरणका लागि, केही हेरेको अनुहार सक्रिय छन् र कार्यहरु गर्न ट्याप गर्न सकिन्छ. क्रोनोग्रफ अनुहार को तल को माथि दोहन एक स्टपवाच बन्द सेट, तर तपाईं एक घडी सुरु गर्न सक्दैन वा एक अलार्म सेट. यो घडी पनि केही कारण लागि विजेट छैन, जहाँ अलार्म गर्छ.
Samsung गरेको एस-आवाज सेट टाइमर र अन्य द्रुत गतिविधिहरु लागि राम्रो काम गर्छ, तर म एक Hangout मा एक उत्तर गरिदिएको प्रयास संघर्ष. अन-स्क्रिन किबोर्ड द्रुत कुराहरू लागि काम गर्दछ, यो सजिलो जवाफ छिटो इमोजी चयन गर्न घुमाउँदा bezel बनाउँछ गर्दा.
Samsung गरेको एस-आवाज सिस्टम सेट टाइमर र अलार्म लागि राम्रो पर्याप्त काम गर्दछ, तर अब गुगल वा एप्पल गरेको सिरी रूपमा एकदम रूपमा राम्रो छैन. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
सैमसंग गियर S2 लागत गाढा खैरो वा चाँदी मा £ 249. गियर S2 क्लासिक काले लागत £ 299. दुवै पूर्व-आदेश लागि उपलब्ध छन्, मा ढुवानी 12 नोभेम्बर.
तिनीहरूले एन्ड्रोइड-उपयुक्त हेर्छ लागि मूल्य कोष्ठक को उच्च-अन्त मा छन्. यो कंकड समय लागत £ 180, को गति 360 £ 229 र huawei वाच £ 289. यो स्याउ वाच लागत £ 299.
यो Tizen गरेको विकासकर्ताले अनुप्रयोग समर्थन को कमी फिर्ता आयोजित छ, जो परिवर्तन गर्न असम्भाव्य छ, तर बस सैमसंग एन्ड्रोइड स्मार्टफोन भन्दा बढी यसको समर्थन सही दिशा मा एक कदम हो.
के यो राम्रो हुन्छ गर्छ, यो सिर्फ एकदम केही अन्य smartwatches रूपमा बहुमुखी छैन.
पेशेवरों: आरामदायक, उत्कृष्ट घुमाउँदा bezel इन्टरफेस, विस्तृत एन्ड्रोइड अनुकूलता, पनरोक, ठूलो पर्दामा, NFC
नकारात्मक: सीमित अनुप्रयोग समर्थन, स्वामित्व पट्टियाँ, एस-आवाज Google मा कमसल अब, कुनै क्रस-मंच समर्थन
संगीत नियन्त्रण डबल थिचेर सानो बटन द्वारा चाँडै पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ, रूपमा गर्न सक्छन् सेटिङ परिवर्तन गरेर कुनै पनि अन्य अनुप्रयोग. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
कंकड समय समीक्षा: आईफोन भन्दा Android मा राम्रो
मोटोरोला मोटो 360 (2015) समीक्षा: मूल छन् गर्नुपर्छ
समीक्षा huawei वाच: सबै भन्दा राम्रो Android Wear smartwatch
समीक्षा स्याउ वाच: जटिल सफ्टवेयर द्वारा SPOILED सुन्दर हार्डवेयर
Samsung गियर एस समीक्षा: फोन निर्मित एउटा smartwatch स्मार्टफोन प्रतिस्थापन गर्न सक्छ?
एन्ड्रोइड, लेख, ग्याजेटहरू, समीक्षा, samsung, शमूएल गिब्स, Smartwatches, प्रविधि, पहिरनयोग्य प्रविधि
← रातो ग्रह हाम्रो समझ कायापलट भनेर पाँच मंगल आविष्कारहरू सबै भन्दा राम्रो स्मार्टफोनको (2015) [भिडियो] →